အမှတ် ၁၁၊ ၂၀၁၀ ဆောင်း ဦး ရာသီ - သတင်းဆုပေးပွဲ - The Reward Foundation
ပင်မစာမျက်နှာ အမှတ် 11 ဆောင်းဦးရာသီ 2020
မင်္ဂလာပါ။ ရာသီဥတုအေးလာတာနဲ့အမျှသင့်ရဲ့နှလုံးကိုနွေးထွေးစေမယ့်ချစ်စရာကောင်းတဲ့အရာတွေပါ ၀ င်ပြီးဒီပိုစတာထဲမှာသတင်းကြီးကြီးမားမားရှိပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ဆောင်း ဦး ရာသီကအိုင်ယာလန်ကိုသွားတဲ့အလုပ်မှာဒီဓာတ်ပုံကိုရိုက်ခဲ့တယ်။ ဒါဟာကျော်ကြား Tralee ၏နှင်းဆီအောက်မေ့။ တုံ့ပြန်ချက်အားလုံးကို Mary Sharpe မှကြိုဆိုပါသည် mary@rewardfoundation.org.
အခမဲ့သင်ခန်းစာအစီအစဉ် (၇) ခုစတင်ခဲ့သည်
သတင်းကြီး Reward ဖောင်ဒေးရှင်းမှအလယ်တန်းကျောင်းများအတွက်အင်တာနက်ရုပ်ပုံနှင့်ဆက်စ်တင်ခြင်းဆိုင်ရာအခြေခံသင်ခန်းစာ ၇ ခုကိုအခမဲ့ဖွင့်လှစ်ရန်ကြေငြာခဲ့သည်။ ယူကေ၊ အမေရိကန်နှင့်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာထုတ်ဝေမှုများရှိသည်။ သင်ခန်းစာများသည် (ယူကေနှင့်စကော့တလန်) အစိုးရ၏ဆက်ဆံရေးနှင့်လိင်ပညာရေးဆိုင်ရာလမ်းညွှန်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီပြီးယခုဖြန့်ဝေရန်အသင့်ဖြစ်နေပြီ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထူးခြားသောချဉ်းကပ်မှုသည်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ် ဦး နှောက်ကိုအာရုံစိုက်စေသည်။ Reward ဖောင်ဒေးရှင်းကိုတော် ၀ င်အထွေထွေရောဂါကုဆရာ ၀ န်ကောလိပ်မှလေးနှစ်တာကာလအတွင်း 'ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်လိင်ဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှု' ဆိုင်ရာသင်တန်းပေးခြင်းအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုခံရသည်။
"အင်တာနက်ပေါ်ကလှုပ်ရှားမှုအားလုံးထဲကအပြာဟာစွဲလမ်းစေနိုင်တဲ့အစွမ်းအရှိဆုံးပဲ " ဒတ်ခ်ျအာရုံကြောသိပ္ပံပညာရှင်များပြောကြသည် Meerkerk et al.
ပထမ ဦး ဆုံးအနေဖြင့်လွန်ခဲ့သောဆယ်စုနှစ်အတွင်းပြည်သူ့ရေးရာကဏ္ cut ၏အားနည်းချက်များကြောင့်ကျောင်းများသည်သင်ခန်းစာများအတွက်ငွေအနည်းငယ်သာရှိသည်ဟုဆိုလိုသည်။ ဒုတိယအချက်အနေဖြင့်ကလေးငယ်များအရွယ်ရောက်ပြီးသူပစ္စည်းများကိုမထိမိအောင်တားဆီးနိုင်သောအသက်စစ်ဆေးခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေပြbelow္ဌာန်းခြင်း (အောက်ဖော်ပြပါသတင်းကိုကြည့်ပါ) ကံမကောင်းအကြောင်းမလှစွာနှောင့်နှေးခြင်းသည်ရောဂါကူးစက်မှုကာလအတွင်းအခမဲ့၊ streaming များ၊ ဤနည်းအားဖြင့်လိုအပ်ချက်အရှိဆုံးသူများသည်နောက်ဆုံးပေါ်သိပ္ပံဆိုင်ရာသုတေသနအပေါ် အခြေခံ၍ လွတ်လပ်သောပစ္စည်းများရယူနိုင်သည်။
ကျေးဇူးပြုပြီးသင်ခန်းစာတွေကိုဖြန့်ဝေပေးပါ။ သင်တို့၏လှူဒါန်းမှုဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့အားကူညီလိုပါကမကြာခင်ကလှူဒါန်းရန်ခလုတ်အသစ်ကိုရရှိလိမ့်မည်။ သင်ခန်းစာများကိုကြည့်ပါ ဒီမှာ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုလည်းကြည့်ပါ ဘလော့ဂ် တစ် ဦး အမြန်နိဒါန်းအဘို့ထိုသူတို့အပေါ်မှာ။
ဤတွင်ကြည်နူးဖွယ်, ကာတွန်းဖြစ်ပါတယ် ဗီဒီယို ချစ်ခြင်းမေတ္တာဆိုတာဘာလဲ? ကျွန်ုပ်တို့အာရုံစိုက်သည့်အရာနှင့်သေးငယ်သောအရာများမည်မျှအရေးပါသည်ကိုသတိပေးရန်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤရည်မှန်းချက်ကိုမျက်ခြည်မပြတ်ဘဲညစ်ညမ်းမှုနှင့်ပတ်သတ်သောအန္တရာယ်များကိုသာအာရုံမစိုက်ရပါ။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းလည်းအရေးပါသည်။
ချစ်ခြင်းမေတ္တာထိတွေ့ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏သာယာဝပြောမှုအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောကြောင့်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံခြုံမှု၊ ဂရုစိုက်မှုနှင့်လျော့နည်းစေသည် အလေးပေး။ ဘယ်အခါနောက်ဆုံးထိမိခဲ့တာလဲ ပိုမိုသိရှိလိုပါကဘီဘီစီမှစစ်တမ်းတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့သည် ထိတွေ့မှုစမ်းသပ်ခြင်း ဒီအများကြီးအောက်မှာ - သုတေသနပြုသဘောပေါက်ပေါ်။ စစ်တမ်းသည်ယခုနှစ်ဇန်နဝါရီလမှမတ်လအထိဖြစ်သည်။ နိုင်ငံပေါင်း ၁၁၂ နိုင်ငံမှလူပေါင်း ၄၄၀၀၀ နီးပါးတက်ရောက်ခဲ့သည်။ စစ်တမ်း၏ရလဒ်များနှင့်ပတ်သက်သောအစီအစဉ်များနှင့်ဆောင်းပါးတွဲများစွာရှိသည်။ ထုတ်ဝေသောပစ္စည်းအနည်းငယ်မှကျွန်ုပ်တို့အတွက်အထူးများကိုဖော်ပြထားသည်။
သုံးလေ့သုံးဆုံးစကားလုံးများ ထိတွေ့မှုကိုဖော်ပြရန် “ နှစ်သိမ့်ခြင်း၊ နွေးထွေးခြင်းနှင့်ချစ်ခြင်းမေတ္တာ” တို့ဖြစ်သည်။ အံ့သြစရာက“ နှစ်သိမ့်ခြင်း” နှင့်“ နွေးထွေးခြင်း” သည်ကမ္ဘာအနှံ့ရှိလူအများအသုံးပြုသောအသုံးအများဆုံးစကားသုံးခုတွင်ပါဝင်သည်ဟူသောအချက်ဖြစ်သည်။
လူ၏ထက်ဝက်ကျော်သည်၎င်းတို့တွင်မရှိဟုထင်ကြသည် လုံလောက်ထိ သူတို့ရဲ့ဘဝတွေကို။ စစ်တမ်းတွင်လူ ၅၄ ရာခိုင်နှုန်းကသူတို့၏ဘဝများ၌ထိတွေ့မှုသိပ်မရှိကြောင်း၊ ၃% ကသာအလွန်အကျွံရှိကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။
ကျနော်တို့အမျိုးမျိုးကိုအသုံးပြုသည် အာရုံကြောအမျှင် ထိတွေ့မှုအမျိုးမျိုးကိုရှာဖွေရန်။
“ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အရေပြားကိုညှစ်လိုက်ရင်ဒါမှမဟုတ်မြန်မြန်ဆန်ဆန်လုပ်မိရင်မြန်မြန်ဆန်ဆန်အာရုံကြောအမျှင်တွေတုန့်ပြန်ပြီး somatosensory cortex လို့ခေါ်တဲ့ ဦး နှောက်toရိယာကိုသတင်းပို့ပေးတယ်။ သို့သော်မကြာသေးမီနှစ်များကအာရုံကြောသိပ္ပံပညာရှင်ပါမောက္ခ Francis McGlone သည်အခြားအာရုံ၏အခြားအရှိန်နှုန်း၏ ၅၀ ရာနှုန်းခန့်တွင်သတင်းအချက်အလက်ကိုပို့ဆောင်ပေးသောအာရုံကြောဖိုင်ဘာ (afferent C အမျှင်များဟုသိကြ) ကိုလေ့လာနေသည်။ သူတို့ကသတင်းအချက်အလက်ကို insular cortex လို့ခေါ်တဲ့ ဦး နှောက်ရဲ့အခြားအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဆီကိုထပ်ဆင့်လွှင့်ပေးတယ်။ အဲ့ဒီ့မှာအရသာနဲ့စိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုလည်းလုပ်ဆောင်ပေးတယ်။ ဒီတော့ဒီနှေးနှေးကွေးတဲ့စနစ်ကဘာကြောင့်မြန်မြန်ဆန်ဆန်လောက်တိုးတက်လာတာလဲ။ Francis McGlone ကနှေးကွေးသောအမျှင်များသည်အသားအရေကိုနူးညံ့စွာထိုးနှက်ခြင်းအားဖြင့်လူမှုရေးနှောင်ကြိုးကိုမြှင့်တင်ရန်ရှိကြောင်းယုံကြည်သည်။
Strangulation ခေါ် 'Breath Play' သည်လျင်မြန်စွာမြင့်တက်နေသည်
ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့်လူငယ်များအကြားပိုမိုဆိုးရွားလာသည့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာထိတွေ့မှုသည်ပိုမိုများပြားလာသည်။ ၎င်းသည်ညစ်ညမ်းစက်မှုလုပ်ငန်းနှင့်၎င်း၏လေ့လာသုံးသပ်သူများအား 'air play' သို့မဟုတ် 'breath play' ဟုအမည်တပ်ထားသောကြောင့်၎င်းသည်လုံခြုံမှုနှင့်ပျော်စရာကောင်းသည်။ အဲဒါမဟုတ်ဘူး။ ၎င်း၏အမည်ရင်းမှာဆိုးဝါးသောထူးဆန်းခြင်းမဟုတ်ပါ။
ဒေါက်တာ Bichard သည် North Wales Brain Injury Service တွင်ဆေးခန်းဖွင့်ထားသူဖြစ်သည်။ သူမက“ နှလုံးရောဂါဖြင့်ဖမ်းဆီးခြင်း၊ လေဖြတ်ခြင်း၊ ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျခြင်း၊ မထိမခိုက်ခြင်း၊ မိန့်ခွန်းမမှန်ခြင်း၊ ဖမ်းဆီးရမိခြင်း၊ ငါတို့ကြည့်ပါ ဘလော့ဂ် ထိုသို့ပေါ်မှာ။
ဇန်နဝါရီလ 2020 အတည်ပြုအတည်ပြုခြင်းဆိုင်ရာ Virtual Conference
လိင်အကြမ်းဖက်မှုကိုစွဲမက်စေသည့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေအမျိုးအစားကိုကလေးများလက်လှမ်းမီမှုကိုကျွန်ုပ်တို့မည်သို့လျှော့ချနိုင်သည်ကိုသင်သိလိုပါက၎င်းကိုသင်စိတ်ဝင်စားလိမ့်မည်။ Reward ဖောင်ဒေးရှင်းမှနွေရာသီကာလအတွင်းဗြိတိန်နိုင်ငံရှိကလေးသူငယ်များဆိုင်ရာပရဟိတအဖွဲ့၏အင်တာနက်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာအတွင်းရေးမှူး OBE၊ John Carr နှင့်အတူပထမဆုံးသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေဆိုင်ရာအသက်အရွယ်စစ်ဆေးခြင်းဆိုင်ရာညီလာခံကိုပြုလုပ်ရန်အတူလုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည်နိုင်ငံပေါင်း ၂၉ နိုင်ငံမှသင်တန်းသား ၁၆၀ ကျော်နှင့် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်ဇွန်လတွင် ၃ ရက်ခွဲကျော်အတွင်းဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ ရှေ့နေများ၊ ပညာရှင်များ၊ အစိုးရအရာရှိများ၊ အာရုံကြောသိပ္ပံပညာရှင်များနှင့်နည်းပညာကုမ္ပဏီများတက်ရောက်ခဲ့သည်။ ငါတို့ကြည့်ပါ ဘလော့ဂ် ကပေါ်မှာ။ ဒီမှာ နောက်ဆုံးအစီရင်ခံစာ ကွန်ဖရကနေ။
အချက်အလက်အသစ်များထည့်သွင်းသောအခါမိဘလမ်းညွှန်ကိုကျွန်ုပ်တို့ပုံမှန်မွမ်းမံသည်။ ယနေ့ porn သည်အတိတ်ကညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများနှင့်အဘယ်ကြောင့်ကွဲပြားခြားနားရကြောင်းနှင့်မိဘများကိုနားလည်ရန်အတွက်အကြံဥာဏ်များ၊ ဗွီဒီယိုများနှင့်အခြားအရင်းအမြစ်များပြည့်နှက်နေသည်။ ချဉ်းကပ်နည်း။ မိဘများသည်ကလေးများနှင့်စကားစမြည်ပြောဆိုသူများအတွက်ကူညီရန်ဝက်ဘ်ဆိုက်များနှင့်စာအုပ်များရှိသည်။